Ururka 89-aad ee xoogga dalka oo qaatay tababar adag | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ururka 89-aad ee xoogga dalka oo qaatay tababar adag
Ururka 89-aad ee xoogga dalka oo qaatay tababar adag
Muqdisho (SNTV)-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xoogga saareysa Dhismaha ciidammada Qalabka sida ururka 89-aad SAADKA ee ciidanka xoogga dalka waxaa la siiyey tababar adag oo socdey muddo Lix bilood.
Madaxa Hoggaanka Saad ciidanka Xoogga dalka Jeneraal Maxamed Maxamuud Garabeey ayaa sharraxay tababarkaan nooca uu ahaa iyo waxa laga filayo ururka 89-aad ee ciidanka
Waxa uu la dar daarmay ciidamamdii tababarka la siiyey, kuna ammaanay dhabar adeegga ay muujiyeen, taliayha ciidanka Xoogga dalka S/ Gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen (Gorod) ayaa si gaar ah ugu ammaanay macallimmiintii Tababarka bixisay.
Taliyaha ciidammada Xoogga ayaa si rasmi ah u soo xiray tababarkii ururka 89-aad ee SAADKA.
Previous articleDaraasiin dad ah oo Kooxda Arxanka daran B.Haram dishay.
Next articleMunaasabad lagu wacyi galinayey Ciidanka oo lagu qabtay Muqdisho